JOOX Music unavailable in Myanmar from6July 2022 - JOOX
JOOX Music unavailable in Myanmar from6July 2022
Written By JOOXMM 23 May 2022
Dear JOOX Music Fans We regret to inform you that as of6July 2022, the JOOX Music service will come to an end in Myanmar. Users will no longer be able to access the JOOX Music app. As passionate lovers of music and entertainment, we are honoured to provide you with premium music entertainment and access to its music library, spanning over 45-million songs, as well as exclusive LIVE performances in Myanmar. Please visit our FAQ page for more information on your JOOX experience. Please check FAQ as below. Regards JOOX team.
၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၆ ရက်နေ့မှစတင်ပြီး JOOX Music ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်ရရှိနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။ ချစ်ခင်လေးစားရပါသော JOOX ဂီတပရိသတ်များခင်ဗျာ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အသုံးပြုနေသော JOOX Music ဝန်ဆောင်မှုသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၆ ရက်နေ့တွင် ကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါသောကြောင့် JOOX Music App သို့ဝင်ရောက် အသုံးပြုနိုင်တော့မည် မဟုတ်ကြောင်းအကြောင်းအပ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့၏ ဂီတဖျော်ဖြေမှုများကိုနှစ်သက်သော ပရိသတ်ကြီးများအတွက် သီချင်းပေါင်း ၄၅ သန်းကျော်ပါဝင်သည့် ပြည်တွင်းပြည်ပမှသီချင်းများအပြင် မြန်မာနိုင်ငံမှဂီတချစ်ပရိသတ်များအတွက်လည်း အထူးသီးသန့် LIVE ဖျော်ဖြေမှုများပံ့ပိုးနိုင်ခဲ့သည့်အတွက် အလွန်ပင်ဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါသည်။ JOOX ပတ်သတ်ပြီးအသေးစိတ်သိလိုပါကကျေးဇူးပြုပြီး FAQ စာမျက်နှာသို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိလိုပါက FAQ တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ချစ်ခင်လေးစားစွာဖြင့် JOOX Team.
1. Why will JOOX cease its music services in Myanmar?
Due to the changing market environment in Myanmar, JOOX Myanmar will cease its operation in6July 2022. JOOX will continue to operate in Hong Kong, Indonesia, Macau, Malaysia & Thailand.
1. JOOX သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၎င်း၏ ဂီတဝန်ဆောင်မှုများကို အဘယ်ကြောင့် ရပ်ဆိုင်းမည်နည်း။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြောင်းလဲနေသော စျေးကွက်အခြေအနေများကြောင့် JOOX Myanmar သည် 2022 ခုနှစ် ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှစတင်၍ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကို ရပ်ဆိုင်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဟောင်ကောင်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ မကာအို၊ မလေးရှားနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့တွင် JOOX သည်ဆက်လက်လည်ပတ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
2. Why can't I pay for my VIP?
JOOX VIP subscription services in Myanmar will stop from 23 May, 2022 and customers will not be charged for the VIP fee from this day onwards. Any VIP services purchased on or before 23 May, 2022 will still be valid until6July 2022. For more queries, please email us at support@joox.com
၂. VIP ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် မည်သို့လုပ်ဆောင်နိုင်သနည်း။
၂၀၂၂ ခုနှစ် မေလ ၂၃ ရက်နေ့မှစတင်၍ မြန်မာနိုင်ငံရှိ JOOX VIP စာရင်းသွင်းဝန်ဆောင်မှုများ ရပ်နားမည်ဖြစ်ပြီး အခကြွေးငွေဖြစ် VIP များဝယ်ယူနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော် ၂၀၂၂ ခုနှစ် မေလ ၂၃ ရက်မတိုင်ခင်နှင့် ၂၀၂၂ ခုနှစ် မေလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ဝယ်ယူထားသော VIP များအား ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၆ ရက်နေ့အထိအသုံးပြုနိုင်သည့်သက်တမ်းရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ထပ်မံသိလိုပါက support@joox.com သို့အီးမေးလ်ပို့ပြီးမေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
3. What happens to my coins and diamonds?
No new coins can be purchased from 23 May 2022 onward, you can spend out on JOOX app on or before6July 2022. Afterwards, the coins and diamond will no longer be valid. For more queries, please email us at support@joox.com
၃. ကျွန်ုပ်၏ Coins နှင့် Daimonds များမည်သို့ဖြစ်သွားမည်နည်း။
Coins များအား၂၀၂၂ ခုနှစ် မေလ ၂၃ ရက် မှစတင်၍ ဝယ်ယူရရှိနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။ ကျန်ရှိနေသော Coins နှင့် Daimonds များအား JOOX App တွင် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၆ ရက်မတိုင်ခင်အထိအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ထိုရက်ကျော်လွန်ပါက အသုံးပြုနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။ ထပ်မံသိလိုပါက support@joox.com သို့အီးမေးလ်ပို့ပြီးမေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
4. What happens to my songs?
JOOX Music app & website's music streaming service will stop operation in Myanmar starting from6July 2022. You will not be able to access your playlists and songs since then. For more queries, please email us at support@joox.com
၄. ကျွန်ုပ်၏သီချင်းများ ဘာဖြစ်သွားမည်နည်း။
၂၀၂၂ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၆ ရက်နေ့မှစတင်၍ မြန်မာနိုင်ငံရှိ JOOX Music App နှင့် ဝဘ်ဆိုက်လည်ပတ်မှု ဝန်ဆောင်မှုများရပ်တန့်မည်ဖြစ်ပါသောကြောင့် သီချင်းများနှင့် playlist များအားဆင်လက်နားဆင်နိုင်နားထောင်ကြည့်ရှုနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။ ထပ်မံသိလိုပါက support@joox.com သို့အီးမေးလ်ပို့ပြီးမေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
Melon Music Award 2021 ဆုပေးပွဲကို JOOX မှတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်မည့်အစီအစဉ်။
Alan Walker နဲ့ မြန်မာပရိသတ်တွေတိုက်ရိုက်တွေ့နိုင်တဲ့အခွင့်အရေး
Korea Drama ထဲမှ စတုတ္ထမြောက် အကုန်အကျအများဆုံး "Jirisan"
Songs OnlineArticlesJOOX Music unavailable in Myanmar from6July 2022